Nleta nke Grand Canyon nke Colorado | Akụkọ Njem
Nleta nke Grand Canyon nke Colorado
Mariela Carril | | Ebe njegharị, United States
Omenala ndị America emeela njem ụwa dum na ụlọ ọrụ ọdịnala ya dị ike. Obi abụọ adịghị ya, anyị maara ebe, nkuku, ebe, na United States, na anyị enwetabeghị ụkwụ ma ọ bụ na anyị na-atụ anya ileta: Osimiri Ukwu nke Colorado otu n'ime ha?
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ odida obodo kwesịrị ile anya. Ha na-ekpuchi oke ya, ịdị ebube ya, na mma ya zoro ezo. Ọ bụ ya mere taa anyị ga-elekwasị anya na ihe ọghọm a nke emere na ọtụtụ nde afọ gara aga nke na-echere anyị América del Norte.
1 Ukwu kaniyon
2 Grand kaniyon njem
Ọ bụ elu ugwu ndagwurugwu nke guzobere Osimiri Colorado na Arizona. Tụọ Ogologo kilomita 446 na kilomita 29 n'obosara. N’akụkụ miri emi nke miri emi ya karịrị mita 1800.
Taa, mpaghara ahụ dum bụ akụkụ nke Nnukwu Ugwu National Canyon na ndokwa abụọ nke ụmụ amaala, ndị Hualapai na Navajo, kpọmkwem. E guzobere ọwa mmiri ihe dị ka ijeri afọ abụọ gara aga taa ndị ọkà mmụta banyere ala kwetakwara na ihe dị ka nde afọ ise ma ọ bụ isii gara aga, Osimiri Colorado guzobere n'ụzọ doro anya, na-akpụzi ya ma na-ebuwanye ibu ma na-agbasawanye.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ndagwurugwu miri emi ọ bụghị n'ụzọ miri emi na ụwa, nke ahụ dị na Nepal, mana ọ bụ n'ezie nnukwu na nhazi ya di omimi na-eme ka o maa nma.
Grand kaniyon njem
Na-adọta ndị ọbịa nde ise afọ na ihe karịrị 80% bụ ụmụ amaala US ebe ndị ọzọ si Europe. Ekwesịrị ikwu ya enwere mpaghara abuo: South Rim na North Rim. na South Rim mepere n'afọ niile ma ọ bụ n’oge ọnwa ọkọchị, n’agbata Juun na Ọgọstụ, na a na-enwe ọtụtụ mmadụ mana n’oge opupu ihe ubi ọ dịkwa mma ma bụrụ otu ihe ahụ n’oge mgbụsị akwụkwọ, site na Septemba rue Ọktọba.
N'ụzọ doro anya, n'oge oyi, ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na-ada nke ukwuu n'ihi na ọ bụ oyi. N'ezie, North Rim na-emechi n’oge oyi ma ọ na-emepe n’agbata etiti ọnwa Mee na etiti Ọktoba ma ọ bụrụ na ihu igwe dị mma. Ọ bụ mpaghara nke na-anabatakarị nleta ole na ole enweghị ọtụtụ akụrụngwa dika nwanne ya nwoke si na ndida. N’etiti ha e nwere narị kilomita atọ na iri ise, ihe dị ka awa ise na-akwọ ụgbọala.
South Rim ma ọ bụ Oke South dị ihe dịka mita 2300 nke elu na North Rim n'ihe dị ka 2700 mita. Ọ bụ nnukwu ogologo ka ike gwụrụ mmadụ n'ụzọ dị mfe. Osimiri Colorado na-agafe mita 1500 n'okpuru South Rim, nke dị n'okpuru, nke mere na a na-ahụ ya site na isi ebe dịtụ mma.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ya n’ezie, ị ga-ewere moto jiipu ma mee awa abụọ na ọkara site na South Rim ruo Lees Ferry. Nke a bụ Lees Ferry osimiri "na eze" na-amalite na ọ bụ naanị ole na ole mita miri emi. South Rim dị kilomita 100 site na Williams, Arizona na 130 si Flagstaff, obodo Amtrak ụgbọ oloko jere ozi. Si ebe a ị nwere ike ijide bọs gaa Grand kaniyon.
Far North bụ ebe pere mpe na karịa. Enweghị ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko dị nso ka ịnwere ike iji ụgbọ ala rute ebe ahụ. Nwere ike ịga Las Vegas, kilomita 420 n'akụkụ ọdịda anyanwụ, mana enweghị njem ọha na eze na mpaghara a nke ogige ahụ, naanị bọs oge a na-ejikọ na ndịda na ugwu na oge. Dị ka anyị kwuru, South Rim na-emeghe afọ gburugburu 24 awa.
Busgbọ ala ụgbọ ala bụ n'efu n’ebe ndị mmadụ bi na Grand Canyon. Cheta na isonye n’isi abuo n’ime ugbo ala bu nkeji awa ise. Maka akụkụ ya, Far North dị naanị site na Mee ruo Ọktọba, nke bụ ebe obibi na ebe ndị mara ụlọikwuu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme ndaputa. Adịla anwa ịkwọ ụgbọala n'ihi na enwere snow, ya mere ekwesịrị ịsị na ọ bụghị ihe amamihe dị na ịme ihe ọ bụla dị egwu ebe a.
Ọfọn nke ọma ihe kachasị mma na-etinye uche na mpaghara a na-akpọ Oke South Ma ihe anyị ga-eme ga-adabere na oge anyị nwere. Na a di na nwunye nke awa anyị nwere ike ije site na ihe panoramic si Mather, Yaki ma ọ bụ Yavapai, na ọkara otu ụbọchị anyị nwere ike ịmụta ntakịrị banyere akụkọ banyere ala nke ndagwurugwu n'otu n'ime ebe ndị ọbịa, gaa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ n'ụkwụ ụzọ Greenway na-aga Paraje Pima ma ọ bụ were ụgbọ mmiri Hemrit Airway.
I nwekwara ike banye na mmemme ranger, ma ị ghaghị ịma Bekee, n'ezie. Ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị zuru ezu enwere ọtụtụ ogologo ụzọ ụkwụ ime, n'ihi na ihe atụ South Kaibab ma ọ bụ na Bright Angel, ma ọ bụ ụgbọ ala ime Viewzọ Ọzara Anya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị ole na ole, nke ọma n'ihi na anyị agaghị aga ebe ahụ iji jee ije ọtụtụ awa, n'ụzọ doro anya, anyị nwere ike ịhazi atụmatụ dị iche iche site na ndagwurugwu.
Ọbụna, na-esite ebe dị anya, anyị enweghị ike ịnọdụ na oke ndịda, anyị ga-aga na mgbago ugwu. N'okwu a, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ njem ma ị nwere ike ịhọrọ ịga ije, je jeepu, gude ịnya alị, nọ l'ẹka aphụ na-enweta mma nke kaniyon.
Ndi Grand Canyon National Park nke Colorado nwere onu ahia ugwo? Eeh, n'ọnụ ụzọ na-agụnye ngwụcha abụọ ma dị irè maka otu izu, ụbọchị asaa, yabụ na ị nwere oge iji hazie njem ahụ. Ọ bụrụ n'ịga n'ụgbọala ị ga-agharịrị ikike maka $ 30. Ọ bụrụ na ị na-aga site na ọgba tum tum na ọ bụ obere dị ọnụ ala karịa na-efu 25 dollar. Onye toro eto na ụkwụ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ dịka onye otu na-akwụ dollar iri na ise.
Ọ bụrụ n’ikpebie maa ụlọikwuu n'ime ogige ahụ ị ghakwara ịkwụ ụgwọ, kwa abalị. Have ga-ede akwụkwọ na ụdị tiketi ndị a na-ere ngwa ngwa ka ị ghara ịrahụ ụra. Ma ọ bụrụ na ị chọghị ịma ụlọikwuu mgbe ahụ enwere ụlọ nkwari akụ na ezumike. Nanị ebe obibi na ala nke canyon bụ Phantom Ranch na ụlọ ndị edobere ruo ọnwa 13 tupu oge eruo.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike icheta na Grand Canyon adịghị na New York ma ọ bụ Orlando mana n'akụkụ dịpụrụ adịpụ nke United States. Nke a pụtara na ị nweghị ntụsara ahụ nnukwu obodo na-enye, ma a bịa n'ọmụmụ ihe ụgbọ ala, ọrụ ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọdụ mmanụ. Ọ bụ njem site na mbido rue na njedebe ka ị nọrọ na nkọwa niile ma ọ bụrụ na anyị ga-aga nke anyị, ya bụ, ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ ndị njem. Y’oburu n’achoghi ihu ihe isi ike obula, mgbe ahu odi njem ndia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Nleta nke Grand Canyon nke Colorado